#Madagascar : Fomba fijery iray – Miara-mibaby sondrom-bidim-piainana « | «ONG Lalana Blog
#Madagascar : Fomba fijery iray – » Miara-mibaby sondrom-bidim-piainana «
Tsy mahavelona intsony ny asa fitaterana hoy ireo mpitatitra amin’izao fotoana izao. Tsy mitsaha-mitombo mantsy hoy izy ireo ny fatiantoka miditra noho ny tsy fisian’ny rafitra mazava sy mipetraka mifehy ny asam-pitaterana.
Ankoatry ny fiakaran’ny vidin-tsolika izay tsy ahafahana mampiakatra ny saran-dàlana araky ny fanazavan’ny filoha lefitra nasionalin’ny kaoperativa Kofiam dia mitombo hatrany ny mpifaninana izay samy miezaka manao izay hahazoany mpandeha avokoa.
Ho an’ity kaoperativa voalaza etsy ambony ity, ohatra, dia tamin’ny taona 2005 rizareo no nampiakatra saran-dàlana farany ary tsy nisy intsony izany hatramin’izao. Teo andanin’izany anefa dia tsy nitsaha-nitombo ny vidin-tsolika vokatry ny tolotra sy tinady eran-tany.
Fa ny tena mahazendana, hoy hatrany ny mpikambana anatin’ity kaoperativa ity dia misy mampidina ho 15.000 ariary ny saran-dalana ho an’ny mpandeha iray mihazo an’i Fianarantsoa raha toa ka 23.000 ariary izany hatramin’ny 2005.
Manaporofo izany, hoy ity tompon’andraikitra ity, fa tsy mitsaha-mitotongana ny fidiram-bolan’ny mpanao fitaterana. Maro anefa ireo ezaka tian’izy ireo ho tratrarina toy ny fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena sy ny fivoarana mba hanomezana fahafam-po ny mpanjifa.
Eo ihany koa ny fanorenana toerana vaovao andraisana ny mpandeha izay hapetraka ao Ambositra. Mankalaza ny faha-45 taonany nijoroany tokoa ity kaoperativa ity ankehitriny. Koa mba hanatrarana ireo tanjona kinendriny dia mila sy mitady ny fanohanana any amin’ny fitondram-panjakana rizareo.
Endrika iray anatin’ny arivorivo amin’ny fahasahiranana mianjady sy lalovan’ny olom-pirenena na miahy ho an’ny tenany na miasa amin’ny rafi-pitondrana isan-tokony izao manjo ny mpitatitra izao. Miara-tratry ny sondrom-bidy tsy mbola mety vaofehy na farafaharatsiny azo nosoritana mialoha. Efa voadonany vao samy miantso hoe “vonjeo aho ranaotra”!